တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၌ လူနေအဆောက်အဦပြိုကျမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၅ ဦးကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ ၊ အခြား ၂၃ ဦးပိတ်မိနေဆဲဖြစ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ် ချန်းရှမြို့ ဝမ်ချန်းခရိုင်တွင် လူနေအဆောက်အဦတစ်လုံးပြိုကျမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသည်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၃၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ချန်းရှ ၊ မေ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ်၌ ဧပြီ ၂၉ ရက်က မြေညီထပ်ကြမ်းခင်းအကျယ် ၇၀၀ မီတာခန့်ရှိသည့် “ကိုယ့်ဟာကိုယ်-တည်ဆောက်ထားသော” လူနေအဆောက်အဦတစ်လုံး ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် အပျက်အစီးပုံများအကြား ပိတ်မိနေသူ ၅ ဦးကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း နှင့် အခြား လူ ၂၃ ဦးမှာ ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ကနဦး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ဧပြီ ၃၀ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အခင်းဖြစ်နေရာအနီးတွင် နေထိုင်ကြသည့် ဒေသခံပြည်သူ ၃၉ ဦးမှာလည်း ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သော ဒေသခံ ၅ ဦးကို နီးစပ်ရာဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်၍ ဆေးဝါးကုသမှုပေးထားကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ အခြေအနေမှာ တည်ငြိမ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအဆောက်အဦပြိုကျမှုသည် ဟူနန်ပြည်နယ်မြို့တော် ချန်းရှမြို့၏ ဝမ်ချန်းခရိုင်၌ ဧပြီ ၂၉ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၂၄ မိနစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ၊ အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ နှင့် အများပြည်သူလုံခြုံရေးဌာနများမှ ကယ်ဆယ်ရေးသမားပေါင်း ၇၀၀ ကျော် က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးသည် ပြိုကျသွားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ ဖိအားကြောင့် အပျက်အစီးပုံအဖြစ် ပြားပြားဝပ်သွားကြောင်းသိရသည်။ ယင်းအဆောက်အဦ နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်နေထိုင်သူများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို စိုးရိမ်ပူပန်ရသဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ချက်ချင်းဆိုသလို အရှိန်အဟုန်မြင့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
5 rescued after building collapses in central China
CHANGSHA, April 30 (Xinhua) — Five people have been rescued and 23 others remain trapped afteraself-constructed residential building withafloor area of about 700 square meters collapsed Friday in central China’s Hunan Province, according toapress conference on Saturday, citingapreliminary report.
There are also 39 people missing near the site of the incident, according to preliminary investigation by the police. The five people rescued have been rushed to the hospital and are in stable condition.
The incident took place at 12:24 p.m. in Wangcheng District in the provincial capital Changsha.
Over 700 personnel from fire, emergency management, and public security departments have joined the rescue efforts.
The whole building is on the brink of tumbling down as it receives pressure from the collapsed parts. Rescuers have therefore urgently reinforced it and relocated nearby residents due to safety concerns.
Photos- Rescue operation is underway afteraself-constructed residential building collapsed Friday in Wangcheng District, Changsha, capital of central China’s Hunan Province, April 30, 2022. (Xinhua/Chen Zeguo)